Aiza no aleha – Faran’ny taona : CASK PK 0 – SOARANO -
AccueilVaovao SamihafaAiza no aleha – Faran’ny taona : CASK PK 0 – SOARANO
Aiza no aleha – Faran’ny taona : CASK PK 0 – SOARANO
31/12/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
DJ 9 sy Mpanakanto 8 amin’ny « Big Bounce »
Toerana iray mahasarika ireo tanora rehefa faran’ny taona ny CASK PK 0 etsy Soarano. Mpisokoka kapila 9 sy mpanakanto mivohy ny mozika ankehitriny 8 no hiaraka hanafana ny « Big Bounce » anio alina. Tsy hiato ny fanafanana ny lanonana ary hisy toeram-pitsinjahana telo ao amin’io toerana io. Anisan’ireo mpikosoka kapila hanafana ny seho ry Dj Gouty, Dj Kiero, Dj Natal, Mistery Nathy, Yoann Loïc, Dj Stich. Vahiny manokana nasaina amin’ny hetsika kosa iMister J ary Dj Chronix.
Eo amin’ny sehatry ny fampisehoana sy fampandihizana kosa, dia hifandimby hanafana ny sehatra amin’ity hetsika ity indray ry Jiolambup’s, Adr, Johanne, THT, Agrad Skaiz, Malm Martiora ary Kougar.
Espace Myrah – Ambatomaro
« Nuit Blanche » ahitana an’i Ken sy ny Tana Groupe
« Nuit Blanche » no hamaranan’ny Espace Myrah Ambatomaro ny taona 2018 sy hitsenana ny taona vaovao 2019. Ny Tana Groupe izay fantatra eo amin’ny fahaizana manafana lanonana no hanafana ny fotoana rehetra. Ho vahiny sy hitondra ny talentany mandritra io hetsika io ihany koa anefa i Ken avy amin’ny tarika Mage 4. Torak’izany koa ny tarika The Womena izay hivondronan’ireo andriambavilanitra manana feo sy talenta miavaka. Karazana ody ambava fo 8 no atolotry ny mpikarakara amin’izany, sakafo karazany roa ary tsindrin-tsakafo 6.
Le Residency – Ambodiafontsy – Ampitatatafika
« New Year’s Eve » miaraka amin-dry Moajia sy Ragasy
Hetsika miavaka no atolotry ny « Moon Event » anio alina eny amin’ny Le Residency eny Ambodiafontsy Ampitatafika. Efa vita ny fandaharam-potoana ho an’ity seho ity ka ny ampahany voalohany hiarahana amin’ireo mpanakanto ary ho tohizin’ny mpikosoka kapila kosa aorian’ny misasakalina. Manomboka amin’ny 9 ora alina ka hatramin’ny 10 dia hanafana ny sehatra ny tarika Moajia, hanohy izany avy eo ny tarika Ragasy Band. Manomboka amin’ny 11 ora alina dia misokatra ho an’ireo manan-talenta amin’ny hira kosa ny sehatra. Aorian’ny fandraisana ny taona vaovao dia hanohy ny lanonana ny mpikosoka kapila Didd’s Deejay.
« Le plus grand réveillon de l’année »
Hampiantrano ny « Le plus grand réveillon de l’année » ny efitrano malalaka « Plein aire » eny amin’ny CCI Ivato. Ny orkesitra Zandry mozika no hanafana sy hanentana ny vahiny amin’io takariva io. Nahafantarana ny Zandry Mozika hatramin’izay ny fisian’ny mpitarika eo amin’ny dihy iraisany ka na mahay na tsy mahay mandihy dia afaka mandray anajra avokoa. Hanana ny anara toerany amin’io hetsika hitsenana ny taona vaovao io ihany koa ny tarika Jerry Marcoss sy ny kawitriny.
Tangaina Hotel – Ampitatafika
« Wanna dance » miaraka amin-dry Safidy sy Faniah
Andriambavilanitra mpanakanto manana feo miavaka i Safidy sy Faniah. MPanakanto samy efa zatra ihany koa ny fanafanana lanonana toy ny fitsenana ny taona vaovao. Eny amin’ny Tangaina Hotel eny Ampitatafika no ahitana azy roa ireto anio alina hitsena ny taona vaovao. « Wanna dance » no anarana hisaloran’ny hetsika izay midika fa hanana ny anjara toerany ny tontolon’ny dihy. Hanampy azy ireo amin’ny fanafanana ny lanonana ny orkesitra Baobao sy Dj Denis .
Famaranana ny taona hiarahana amin’i Willy
Mpanakanto anisan’ireo nisongadina tamin’ity taona 2018 ity i Willy. Etsy amin’ny Hotel Le Glacier Analakely izy no hamarana ny taona anio alina. Efa zatra amin’ny fanafanana ireo seho sy hetsika samihafa ity mpanakanto ity ary manana karazana gadona maro izy. Ankoatra ireo hira milamindamina dia anisan’ny nahafantarana an’i Willy ihany koa ireo mozika mihetsiketsika. Ankoatra ireo hirany, dia hanamarika ny famaranana ny taona amin’ny fiangaliana hirana mpanakanto hafa ihany koa Willy sy ny ekipany.
Espace Behenjy Itaosy
Faran’ny taona hafanain’i Ndondola sy Lucia ary Melky
Mpanakanto efa tsy zoviana amin’ny fanafanana lanona no hiara-dia hamarana ny taona eny amin’ny Espace Behenjy Itaosy anio alina. Hifandimby hanafana sy hiraza ny talentany amin’ity alina ity i Ndondolah sy Lucia andaniny ary Melky ankilany. Tsy ankijanona ny lanonana satria dia efa zatra miaraka ireo mpitendrin’ny tarika roa tonta. Anisan’ireo tarika manana mozika mampandihy sy mihetsikatsika i Ndondlah sy Lucia raha tsy hitanisa afa-tsy ny « Miara-mamindra », « Omeko tsy omeko »… Toy izany koa i Melky.
A&C – IVATO
Le plus beau des Réveillions
MPanakanto maro hatrany toy ny isan-taona no miar-amamarana ny taona eny amin’ny A&C Ivato. Anisan’ny mamarana hatrany ny taona eny i Stéphanie izay fantatra amin’ireo hira milamindamina sy ny mozika mafana. Ankoatra an’i Stéphanie dia ho avy hitondra ny « Le plus beau des réveillons » ihany koa ry Eldiot izay mpanakanto nanana ny lazany sy nisongadina tamin’ity taona ity. Toy izany koa ry Black Nadia sy Mario. Karazana gadona samihafa araka izany no hifandimby hanafana ity lanonana eny Ivato ity.